कहाँ के गर्दैछिन् ‘पोर्न स्टार’ बन्ने चक्करमा रहेकी अर्चना पनेरु ? | Entertainment Khabar
कहाँ के गर्दैछिन् ‘पोर्न स्टार’ बन्ने चक्करमा रहेकी अर्चना पनेरु ?
काठमाडौँ । कुनै समय ‘पोर्न स्टार’ बन्ने सपना बोकेर हिडेकी अर्चना पनेरु यतिखेर भारत भासिएकी छिन् । आफूलाई सन्नी लियोनीको फ्यान बताउने अर्चना तथा उनकी आमा सुनिता मिलेर नग्न तस्विर सार्वजनिक गरेपछि उनीहरुलाई कञ्चनपुरको भीमदत्तबासीले निष्काशित गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरु काठमाडौँमा बसाइ सरेका थिए ।
काठमाडौँमा आएपछि पनि उनीहरुको त्यस्तो हर्कत जारी रहेपछि उनीहरु पटक–पटक प्रहरी थुनामा पुगेका थिए । काठमाडौँको गोंगबु बसपार्कमा उनीहरुले डान्सबारमा पनि लगानी गरेका थिए । त्यस्तै, काठमाडौँ रहँदा अर्चनाले अमेरिकी नागरिक उल्फ प्राइससँग विवाह पनि गरेकी थिइन् । विवाहपछि अर्चनाले आफूले पोर्न स्टार बन्ने सर्तमा ती नागरिकसँग विवाह गरेको समेत बताएकी थिइन् ।
तर, उल्फलाई यौन दुरचारको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो । प्राइसको भाडाको घर बलम्बुबाट दुईसय ग्राम गाँजा, लागूऔषध लगायतका समग्रीहरु बरामद गरेको थियो । उक्त घरमा उनले युवतीहरु राखेर यौनधन्दा चलाउँदै आएका थिए ।
पनेरु आमाछोरीले उत्तेजक तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरेपछि उनीहरुको चर्चा भारतसम्म पनि पुगेको थियो । केही भारतीय मिडियाले अर्चनालाई ‘नेपालीकी सन्नी लियोनी’को संज्ञा समेत दिएका थिए । यी आमा–छोरी अहिले भारतको मुम्बाई पुगेका छन् । उनीहरु मुम्बाई पुगेको पनि लामो समय भइसकेको छ । भारतमा केही दिनअघि मात्रै अर्चना भारतको गोवा पुगेकी थिइन् ।
Published date : २०७५-चैत्र-२७ १८:५८
म्युजिक खबरले ल्यायो कृश बहादुर कार्कीको बासना (भिडियो सहित)